grosvenor casino parrs hazo fialam-boly
apollo slots casino tsy misy petra-bola bonus
apollo slots casino finday fidirana
avo roa heny shina shores slot machine
Tamin'ny herinandro lasa Makaô recoded ny avo indrindra isan'andro, ary fito ny andro maneran-tany vahiny hatramin'ny nanombohan'ny Covid-19 areti-mifindra grosvenor casino online fanafoanana ny fotoana.
Ny angon-drakitra ofisialy avy amin'ny Macao Governemanta ny Fizahan-tany (Birao MGTO) dia nampiseho fa tanteraka vao tonga ireo 32,647 ny zoma 26 Martsa, taona iray-on-taona hampitombo ny 1,309% grosvenor casino parrs hazo fialam-boly. Olo-malaza efa mitombo tsikelikely ao 2021, amin'ny farany vokatry ny fitohizan ' izany dia tsara ny hetsika apollo slots casino tsy misy petra-bola bonus.
Manerana ny herinandro 26 Martsa, 189,843 mpitsidika niditra ny manana rafi-pitantanana manokana misolo tena ny eo ho eo isan'andro ny boky 27,120. Ny tarehimarika roa ireo 109.5% sy 77.8% hampitombo ny Sinoa Taom-Baovao fialan-tsasatra fe-potoana, ary ny rehetra febroary, tsirairay avy apollo slots casino tsy misy petra-bola bonus mari-pamantarana 2021. Ny tena zava-dehibe, na izany aza, ity olo-malaza isan-kerinandro dia maneho ny isa avo indrindra ao mpitsidika hatramin'ny talohan'ny nanombohan'ny Covid-19 areti-mifindra, araka ny MGTO."Ny olo-malaza soso-kevitra tapaka miakatra fironana amin'ny vahiny vao tonga vao haingana, raha ny lehibe fikorianan'ny ny mpitsidika dia afaka ho hita ao an-toerana fizahan-tany distrika," hoy ny fanambarana apollo slots casino finday fidirana. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay dia nisy maromaro manosika avy amin'ny Makaô ny governemanta ny hampitombo ny fizahantany ao amin'ny faritra raha mitoetra amin'ny fitetezana iraisam-pirenena mbola be voafetra.
MOP120m ($15m) dia ho lany amin'ny subsidising trano fandraisam-bahiny fitehenan-tanana ho an'ny mponina ao an-toerana, raha ny fizahan-tany tsena fanentanana mikendry ny olom-pirenena Hangzhou, ny tanan-dehibe amin'ny renivohitry ny Zheijang faritany, dia ho nandefa imminently avo roa heny shina shores slot machine. Amin'ny fanaovana izany ny MGTO dia miezaka ny hampitombo ny famaliana ny tahan'ny avy any ivelany ny fototry ny Guangdong sy Hong Kong tsena..